တစ်ဝန်ဆောင်မှုအဆိုပြုချက်ကိုလျှောက်လွှာအဖြစ် software ကို
SaaS အဆိုပြုလွှာဖြေရှင်းခြင်းများ - အဆိုပြုလွှာနှင့် Octiv
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 8, 2010 တနင်္ဂနွေ, ဒီဇင်ဘာလ 4, 2016 Douglas Karr
ဒီ post ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးကိုငါသိကတည်းကဒီ post ကပျော်စရာကောင်းတယ် အဆိုပြုလွှာစနစ်များ... သူတို့ဒီမှာ Indiana မှာ! ၎င်းသည် Anderson တက္ကသိုလ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Purdue ဖြစ်သည်! Sproutbox ဖွံ့ဖြိုးပြီး အဆိုတော် နှင့် စတူဒီယိုသိပ္ပံ ကိုယ့်ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ် အောက်တိုဘာ (ယခင်က TinderBox)၊ ၀ က်ဘ်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအဆိုပြုချက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့် software နှစ်ခုလုံး။
အဆိုပြုလွှာသည်အခြေခံကျသောဒေါ်လာ ၁၉ ဒေါ်လာ၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်တစ်လလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၉ မှ စတင်၍ အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ နှင့်အတူ Highrise ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကြွယ်ဝသောပါဝင်မှုအဆိုပြုချက်များကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်းအတွက်အလွန်စွမ်းရည်ရှိသောစနစ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည် - ထို့အပြင်အဆိုပြုလွှာအားကြည့်ရှုသူ၏အလားအလာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Kristian အဖွဲ့နှင့်ထိတွေ့မှုရှိသကဲ့သို့ အောက်တိုဘာ ကောင်းစွာပွတ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့် Proposable ထွက်ခွာဘယ်မှာယူလိုက်တယ်။ ၀ င်ငွေအဆင့်သည်အထုပ်တစ်ခုအတွက်အရောင်းအဖွဲ့အတွက်တစ်လလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၉ ဖြင့်ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်များအတွက်တစ်လလျှင် ၉၉၉ ဒေါ်လာအထိတိုးသည်။ Octiv တွင်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ module upsell နှင့်အခြားထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များလည်းရှိသည်။
နှင့် Octiv ဗီဒီယို:
လျှောက်လွှာနှစ်မျိုးလုံးသည်တုံ့ပြန်ချက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုပေးပြီးအဆိုပြုလွှာ၏တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်သည်။ ဒီအဆိုပြုစနစ်နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ၏ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောအသုံးပြုသူအဖြစ် Freshbooks ငွေတောင်းခံလွှာဒီစနစ်တွေကို Freshbooks နဲ့ပေါင်းစပ်တာကိုကျွန်တော်တကယ်နှစ်သက်ပါတယ်။ Freshbook များတွင်အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုစနစ် (ငွေတောင်းခံလွှာမူကြမ်းမျိုး) ရှိပြီးဖောက်သည်တစ် ဦး ထံပေးပို့။ ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့တွင်အဆိုပြုချက်နှင့် Octiv တို့၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးမရှိကြပါ။
ဒီထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လွှင့်တဲ့အတွက် Kristian ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ သူနှင့်သူ၏အဖွဲ့သည်၎င်းနှင့်အတူအောင်မြင်မည်မှာသေချာသည်။ Kristian ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်၎င်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားမှုအတွက်မှန်ကန်စွာတံဆိပ်ကပ်လိုပါကသူ၏ကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်၏ရွေးချယ်မှုအမြဲဖြစ်လိမ့်မည်။
Tags: ပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်းကတော့အစီရင်ခံစာများoctivအဆိုတင်သွင်းretention ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလူမှုရေးအစီရင်ခံခြင်း
8:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 22
TinderBox ဖော်ပြခြင်းအတွက် Doug ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇန်နဝါရီလတွင် စမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲကို စတင်ခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော သုံးစွဲသူများ၏ တုံ့ပြန်ချက်များကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ သင်၏ Freshbooks မှတ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်ထားပါမည်။
8:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 29
Proposable ကို ခေါင်းညိတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အင်ဒီယားနားတွင် ကောင်းမွန်သော အဆိုပြုချက်ဆော့ဖ်ဝဲ နှစ်ပိုင်းကို ဤနေရာတွင် တီထွင်ခဲ့သည်ကို သိရခြင်းမှာ ကောင်းပါတယ်။
8:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 32
ချစ်တယ် Doug! KA+A လုပ်ဆောင်သမျှသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း Proposable ၏ အရောင်းအဆိုပြုချက်တည်ဆောက်သူနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ စွမ်းအားကို ကျွန်တော်နှစ်သက်ပါသည်။ စာရေးကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
8:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 57
Brad၊ ပြည်နယ်မှာ ဒီလိုမျိုး စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေ ရှိလို့ ကံကောင်းပါတယ်။ Sproutbox မှထွက်ရှိသောထုတ်ကုန်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်!
9:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 28
Doug - TinderBox ကိုဖော်ပြသည့် ကောင်းမွန်သော ပို့စ်တစ်ခုကို ရေးသားခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အချိန်ယူခဲ့ရသည်မှာ များစွာ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ အခွင့်အလမ်းနှင့် ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အရည်အသွေးကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။
ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့် - KA+A သည် Indy စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းရှိ ရော့ခ်ကြယ်ပွင့်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် Gravity Labs၊ Dustin Sapp နှင့် Mike Fitzgerald တို့မှ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ TinderBox ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။